Local Media - पार्टीको साधारण सदस्य समेत नभएको मान्छे कसरी अध्यक्ष हुन सक्छ ? मै हुँ अध्यक्ष
प्रकाशित समय: बुधवार, ०७ : २८ बजे माघ २ गते
सिन्धुपाल्चोक तरुण दल जिल्ला कार्यसमिति हुंदाहुदै छुट्टै कार्यसमिति गठनले नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक वृतमा तरगं ल्याएको छ । २०७५ मंसिर २७ मा प्रमोद लामाको अध्यक्षतामा कार्यसमित घोषणा गरेर आफु नै तरुण दलको आधिकारिक समिति रहेको दाबी गरेका छन् । २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनका समयमा काग्रेंस परित्याग गरेर तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका दोर्जे लामा काग्रेंस नै फर्के ।
काग्रेंसमा फर्केपछि उनलाइ पुनः तरुण दलको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो । तत्कालिन चुनावी अवस्थामा कारवाही गरी साधारण सदस्य समेत नरहेका उनलाइ जिल्लाका नेताहरुले चुनावी माहोल बिगार्न नहुने भन्दै सोही पदमा पदस्थापन गरेको जानकारहरु बताउँछन् । र हालसम्म पनि उनी तरुण दलको अध्यक्षमा छन् । तर तरुण दल लगायत काग्रेंसजनलाई भने यो कुरा स्विकार्न गा¥हो भयो । प्रमोदलाइ काग्रेंस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतको सर्मथन छ भने दोर्जेलाइ नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका सभापती बिकास लामा लगायतको समर्थन छ ।
यसै विषयमा प्रमोद लामासँग मिडिया सञ्चार डटकमले गरेको कुराकानी
भैरहेको तरुण दललाई नमान्दै छुट्टै तरुण दल गठन गर्नुभएछ नि ?
पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकमा कमिटि गठन गर्दा पनि मैले भनेको थिए । आधिकारीक कमिटि नहुँदा नहँुदै हामीले तरुण दल गठन गरेको हो । हिजो तरुण दलको अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति स्थानिय तहको निर्वाचनताका केही कुरामा विवाद हुदाँ उहाँ (दोर्जे लामा) पार्टी छाडेर तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । नेपाली काग्रेंस र तरुण दलको विधि र विधान अनुसार २०७४ भदौ ५ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको छ । जो अहिले तरुण दलको साधारण सदस्य पनी छैन उ कसरी अध्यक्ष भयो ? सिन्धुपाल्चोक तरुण दलको आधिकारिक अध्यक्ष म नै हो ।
जतिबेला सिन्धुपाल्चोक तरुण दल नेतृत्वविहिन थियो त्यतीबेला नै किन कार्यसमिती गठन गर्नूभएन ?
तत्कालिन अवस्थामा केन्द्र र जिल्लामा नेतृत्व गर्ने नेताज्युहरुसँग छलफल गरी तरुण दललाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेका थियौं । अध्यक्षले पार्टी छाडेपछि तरुण दललाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्दा खै किन हो नेताज्युहरुले मान्नुभएन । तर जे होस् ढिलो आएपनि आज तरुण दल सिन्धुपाल्चोकले नेतृत्व पाएको छ । चुनावी चटारो, नेताज्युहरु व्यस्त भएका कारण तत्कालिन अवस्थामा कमिटि बनाउन नसकेपनि पार्टीमा खेल्न सक्ने भूमिका खेलेर मजबुद तरुण बनाउँँनका लागि अहिले तरुणले नेतृत्व पाएको छ ।
तपाँँइ अध्यक्ष रहेको तरुण दललाई केन्द्रले आधिकारिकता दिएको छ ?
विधि र विधानले चल्ने तरुण दलमा अध्यक्ष भएको मान्छे पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा जाँदा तरुण दल केन्द्रीय समिति र कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्ने, त्यही व्यक्ति पार्टीमा फर्किसकेपछि केन्द्र वा जिल्लाको नेताले कुन विधि विधानमा टेकेर तरुण दलको अध्यक्ष बनाए ? हाम्रो आधिकारिकताको कुरा तरुण दल केन्द्रको हातको कुरा मात्रै रहेन सिन्धु काग्र्रेंस लगाएत आम तरुणले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ र काग्रेंसलाई मजबुद बनाउने सवालमा हामी लागेका छाै। लागिरहन्छौं ।
तपाइको नेतृत्वमा गठन भएको तरुण दल विधि र विधानमा टेकेर भएको हो भनेर कसरी पत्याउँँने ?
एउटा उदाहरण दिउँ छोरी मान्छेले घर पुरानो भएपनि थोत्रो भएपनि स्याहारेर लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेर राख्छ । अरुको राम्रो घर बाहिर बाट देख्यो भन्दैमा अर्को घर जादैंन । हो त्यस्तै म पनि पार्टी जति नै कमजोर अवस्थामा भएपनि स्याहार सुसार गरेर बसेको मान्छे हु । क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँ । अरुको पार्टी मजबुद देख्यो भनेर आफ्नो पार्टी छाडेर जाने र फेरि आएपछि त्यही पद चाहिन्छ भन्ने कही हुन्छ । हामी वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा संगठन विस्तारका लागि पुगेका छौं । पहिले तरुण दल सदस्य भएका साथीहरुलाई एकतित्र गरेर तरुण दल गठन गरिरहेका छौं । एकजुट भएर लागिराछौं । सम्पुर्ण कांग्रेसीजनको हामीमाथि अपार माया छ । त्यसैले पनि हामी आधिकारिक हौं र विधि र विधानमा टेकेर नै गठन गरिएको हो ।
अहिले जिल्ला र केन्द्रबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
केन्द्र, जिल्लाका नेताहरूबाट अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कांग्रेस हारेपनि संगठन विस्तार गर्न लागेछन् है भनेर नयाँ आशा पलाएको छ ।
आउने अधिवेशनमा अध्यक्ष बन्नलाई तपाँँइले बार्गेनिङ गरेको भन्छन जिल्लातिर ?
म पदको भोको कहिले भइन । मैले चाहेको भए वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष जे माग्न पनि सक्थे । तर पदभन्दा माथि पार्टी हो । काग्रेंस बलियो हुन्छ भने, तरुण बलियो हुन्छ भने म नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । इकाइ, गाउँ, गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट प्रतिनिधी भएर जो आएपनि म नेतृत्व स्विकार्न तयार छु । जो आएपनि कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ । आगामी चुनावमा जिल्लामा कांग्रेसलाई एक नम्बर पार्टी बनाउन सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व तरुण दलले पाउनुपर्छ । आम तरुण दलको साथ समर्थन र पार्टीको सहयोग भयो भने म हुन्न भन्ने छैन । तरुण दलको नेतृत्व गर्नेले युवाहरुलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
संगठन बिस्तार के कसरी भैरहेको छ ?
बाह्बिसे नगरपालिकाको इकाई गठन सम्पन्न गरिसकेका छौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताको क्षेत्र भएकाले पनि यहाँबाट हामीले इकाइ गठन सुरु गरेका हौं । केही समयमा हामी ठूलो आमसभा गर्दैछौं । त्यसपछि भोटेकोशी, बलेफि लगायत सबै स्थानीय तहमा इकाइ गठन गर्नेछौं ।
तपाइले इकाइ गठन गर्दा गूटका आधारमा गर्नूभयो भन्ने तपाँँइकै साथीहरूको आरोप छ नी ?
हामीले काग्रेंस नै बढाउने हो । चाहे अरुमा छ हाम्रोमा छ भन्ने कुरा होइन । एकताबद्ध गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो । सबैजना मिलेर भइराखेका कमिटिका साथीहरुलाई पनि पदहरु फरक गरेर हामीले समावेश गरेका छौं । नेपाली काग्रेंस चिलजस्तो हो । चिल माथि माथि जान सक्ने कारण भनेको पखेटा हो । पखेटा जति राम्रो भयो चिलले राम्रो उडान भर्न सक्छ । र त्यो पखेटा भनेको चाहि नेपाली काग्रेंसको शुभेच्छुक भातृसंगठनहरु हो । नेपाल तरुणदल, नेविसंघ, महिलासंघ आदि हो ।
गोल्चेको तरुणदलको साथीसँग हाम्रो सम्पर्क हुनुप¥यो । को हो त्यहाँको तरुण भनेर खोज्ने अवस्था आउनुभएन । चुनावताका एउटा बुथमा १५ जना तरुण हुनुपर्छ । त्यो आजको आजै हुने कुरा होइन । तसर्थ आजैबाट संगठन मजबुद बनाएर त्यो अवस्था बनाउन म दिलो ज्यान दिएर लागि परेको छु । साथीहरुलाई भवितव्य पर्दा साथ दिने, चुनावमा कांग्रेसीजनलाई मत हाल्नका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न, मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन र मतगणनाको अवधिभर मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सक्ने तरुण दल बनाउने योजनामा म छु । त्यसको लागि सम्पुर्णको साथको खाँचो मलाई छ ।